IPFS: Etu esi eji sistemụ Interplanetary na GNU / Linux? | Site na Linux
Ugbu a, na-eme nchọgharị na Intanet (Cloudgwé ojii / Weebụ) dabere tumadi, n'okpuru Protocol Nyefee Protocol (Http), ya bu, Http bụ usoro netwọkụ ejiri na ụwa niile na-enyocha Weebụ Weebụ (WWW). Kemgbe ụbọchị e kere ya (1989-1991) na n’oge ịdị adị ya, o nweela ọtụtụ mgbanwe ma-ọbụ ntụgharị. HTTP 1.2, dị afọ 15, ruo mgbe HTTP 2, wepụtara na May 2015. Ma eleghị anya ugbu a, HTTP 3 weputa ngwa ngwa.
Agbanyeghị, enwere usoro ndị ọzọ, usoro ọhụụ na nke na-atọ ụtọ na mmepe. Otu n’ime ha bụ IPFS nke dabere na a P2P hypermedia protocol (Ọgbọ na Otu Ọgbọ - Onye na Onye), e mebere ya ka ọ rụọ ya ngwa ngwa, odi mfe ma mepee weebụ.
Na ọkwa izizi, akpọ "IPFS: Nchịkọta Njikwa Advanced na P2P na Teknụzụ Blockchain" Anyị na-ekwu banyere ya n'ụzọ zuru ezu: Gini bụ IPFS, kedụ njirimara o nwere, kedu ka esi arụ ọrụ ?, n'etiti ihe ndị ọzọ. Yabụ, ihe ndị a kwesịrị nkenke ya:
"... IPFS nwere ike mejupụta ma ọ bụ dochie Protocol Transfer Protocol ugbu a (HTTP), nke bụ nke na-ebufe ozi ugbu a na igwe ojii (web) na ọkwa ụwa. Ya mere, IPFS na-achọ ịgbanwe ọrụ nke ofntanetị na-arụ ọrụ ugbu a na-adabere na sava ndị agbakwunyere gaa na ebe nrụọrụ weebụ zuru oke n'okpuru P2P Technology na Blockchain. Iji wee si otú a ghọọ a na-ekesa faịlụ usoro, na directories na faịlụ, na ike jikọọ niile kọmputa na ngwaọrụ na dijitalụ ọdịnaya, ụwa, na otu faịlụ usoro".
Ka ọ dị ugbu a, ugbu a, anyị ga-elekwasị anya na echichi na ojiji, nke ya Onye Ahịa Oo na GNU / Linux.
1 Etu esi eji IPFS - sistemụ Njikwa Interplanetary?
Etu esi eji IPFS - sistemụ Njikwa Interplanetary?
Budata onye ahịa ahụ ipfs-desktọọpụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. N'oge a na-ede edemede ahụ, mbipute dịnụ bụ 0.10.4, ma dị na usoro ndị a:
Ozugbo ebudatara, na nke anyị faịlụ ipfs-desktọọpụ-0.10.4-linux-amd64.deb, anyị na-aga n'ihu ịwụnye ya na iwu na-esonụ:
sudo dpkg -i ipfs-desktọọpụ-0.10.4-linux-amd64.deb
Gbaa ndị «Cliente de escritorio IPFS Desktop» si Nchịkọta nhọrọ, emi odude ke ikpehe Intanet. Ọ bụrụ na ọ naghị agba afọ ojuju, gbalịa ime iwu ndị a:
sudo apt wụnye -f
sudo dpkg - nhazi -a
Bulite faịlụ na IPFS netwọk si «Cliente de escritorio IPFS Desktop», site na ngalaba "Ihe ndekọ" na iji bọtịnụ ahụ "Tinye na IPFS". Site na ya, ị nwere ike ibu faịlụ (s) na / ma ọ bụ folda (s) site na kọmputa ma ọ bụ site na ntanetị IPFS. Ọzọkwa, enwere ike ịmepụta folda na «red IPFS» Site n'ebe ahụ.
Nweta ma kekọrịta ya hash ma ọ bụ zuru ipfs ụzọ nke faịlụ (s) na / ma ọ bụ nchekwa (s) kwajuru, n'etiti network ọrụ na-achọ iji nweta ya, site na 3-menu menu (…) nke na-eso mmewere ọ bụla etinyere na «red IPFS».
Nwaleenụ ohere nke faịlụ (s) na / ma ọ bụ folda (s) kwajuru, na iji ihe nchọgharị weebụ na zuru ụzọ ipfs nwetara. Kedu, nwere ike ịbụ ọmụmaatụ, bụ na ọ nwere a 17MB faịlụ vidiyo na m ebugoro, dị ka ngosi maka isiokwu:
Na nchịkọta, dịka ị pụrụ ịhụ usoro ahụ dị mfe, yana «red IPFS» ezigbo maka eg ebugote na ịkekọrịta akụrụngwa faịlụ (s) na / ma ọ bụ folda (s) na site n'ụzọ ndị ọzọ, enweghị ike ịkekọrịta n'ihi enweghị nkwekọ nke usoro, mmachi oke ma ọ bụ ọdịnaya ọdịnaya akọwapụtara.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" na otu esi eji nke a di egwu na akwukwo Usoro Njikwa Interplanetary amara n'okpuru aha «IPFS», nke na-enye a Kesa web, n'okpuru a P2P hypermedia protocol ime ya ngwa ngwa, odi mfe na imeghe, na ọdịnala, nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka mmadụ niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » IPFS: Etu esi eji sistemụ Interplanetary na GNU / Linux?
Nweta LMS: Usoro Nchịkwa Mmụta Ntanetị